Ciise Tarabuun: Soomaaliya oo difaacday siideynta nin Kenya ay dooneyso oo Al-Shabaab ka tirsaa | Biyoguurenews.com
Home Wararka Ciise Tarabuun: Soomaaliya oo difaacday siideynta nin Kenya ay dooneyso oo Al-Shabaab...
Ciise Tarabuun: Soomaaliya oo difaacday siideynta nin Kenya ay dooneyso oo Al-Shabaab ka tirsaa
Soomaaliya ayaa sheegtay in nin ay Maxkamad ku xukuntay inuu Al-Shabaab ahaa, kaas oo Kenya ay raadineyso, uu dhameystay laba sano oo xabsi ah ka dibna la sii daayay.
Dowladda Kenya ayaa sabtidii sheegtay in nin lagu magacaabay Cabdiwaaxi Khaliif oo ku magacdheer Cise Tarabuun, “uu sida ugu dhaqsaha badan u tagay saldhigga booliska ee ugu dhow”.
Farriin uu booliska Kenya dhigay barta Twitter-ka ayey ku dheegeen in “Ciisa Tarabuun” ay aaminsan yihiin inuu soo gaaray magaalada Nairobi 24-kii bishan September. Booliska ma aysan caddeyn sababta ay u raadinayaan iyo waxa uu yahay Ciisa Tarabuun.
National Police Service-Kenya ✔ @NPSOfficial_KE
Haddaba waa kuma Ciise Tarabuun?
Dowladda Soomaaliya ayaa sannadkii 2017 sheegtay in ay gacanta ku dhigtay Ciise Tarabuun oo ay ku tilmaamtay in uu katirsanaa ururka Al Shabaab.
Wasiirka amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Abuukar Ducaale Islow oo xilligaas shir jaraa’id qabtay ayaa sheegay in Ciise Tarabuun ay gacanta ku dhigeen lamaaha ammaanka ee dowladda.
Hadalkii uu maalintaa jeediyay waxaa ka mid ahaa: “Waxaan rabaa in ummadda Soomaaliyeed aan ugu bishaareyo in maanta ay ciidamada qalabka sida gaareen horumar ama guul la taaban karo. Waxay gacanta kusoo dhigeen madaxii amniyaadka Al-Shabaab ee gobolka Banaadir, Cabdiwaaxid Khaliif Axmed oo loo yaqanao Ciise Tarabuun”.
Wasiirka wuxuu intaa ku daray “ninkaas wuxuu ahaa Cadowga Soomaaliyeed. Dad badan oo Soomaaliya lagu dilay, gaar ahaan Muqdisho, wuxuu ahaa ninka keliya ee dhiibi jiray fasaxa ugu dambeeya, marka waan ku faraxsanahay arrintaas, ciidamada waan ugu hambalyeynayaa”.
Sidoo kale agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya, Cabdinuur Maxamed ayaa 19kii bishii June ee sannadkii 2017-kii, wuxuu bartiisa Facebook ku shaaciyay in “ciidanka ammaanka ee dowladda Soomaaliya ay suuqa bakaaraha ka qabteen Cabdiwahaab Khaliif Axmed (Ciise Tarabuun)” oo uu sheegay in uu Al Shabaab “u qaabilsanaa Magaalada Muqdisho”.
Hasayeeshee markii uu soo baxay digniinta ay soo saartay dowladda Kenya, waxaa dad badan ay baraha bulshada aad isu weydiinayay halka lagu maxkamadeeyay Ciise Tarabuun iyo sida uu ku yimid Kenya.
Dowladda Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku cadeysay in Cabdiwahaab Khaliif (Ciise Tarabuun) uu yahay muwaadin Soomaaliyeed oo soo dhameystay xukun maxkamadeed.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya, Aadan Isaaq Cali ayaa sheegay in sannadkii 2017-kii, Cabdiwahaab loo xiray eedo la xiriira argagixisannim, dacwadiisana ay qaaday maxkamadda ciidamada qalabka sida, ka dibna lagu xukumay “laba sano oo xarig ah”.
“Cabdiwahaab ayaa markii uu dhameystay xabsiga ay maxkamadda ku xukuntay la sii daayay sida sharciag uu qabo, waxaana sii deyntiisa in mudo ah ka dib lala socday dhaqdhaqaaqiisa”, ayaa lagu sheegay war saxaafadeedkii ka soo baxay dowladda Soomaaliya.
Dowladda waxaa kale oo ay sheegtay in Cabdiwahaab uu yahay muwaadin maray xukunkii ay amartay maxkamadda.
Ma jirto cid si madaxbanaan u xaqiijin karto maxkamadeynta Ciisa Tarbuun iyo in uu dhamesytay xukunka labada sano ee ay dowladda sheegtay.
Maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya ayaa markasta xukunta dadka lagu eedeeyo in ay AL-Shabaab ka tirsan yihiin ee lagu soo qabto howlgallada.
Ilaa iyo hadda ma cadda qaabka uu Ciise Tarabuun kusoo galay Kenya iyo halka uu ka so galay.
Previous articleWaxaan Qabaa Dawladu In Ay Intii Taagteeda Ah Ay Ordayso Waana La Garanayaa Intay Qaban Karto” Sh. Cabdilaahi Cali Jawhar
Next article28 sano ayuu kasoo horjeeday somaliland madaxawyanaha geelaha jabuuti, walahi haduu inaga hadhi waayo faylalkan ka hayo… Eng Faysal cali waraabe